I-Mainland China: Izimo ezingalindelekile ze-COVID-19 - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
I-Mainland China: Izimo ezingalindelekile ze-COVID-19 – isihloko sosizo
I-Mainland China: Izimo ezingalindelekile ze-COVID-19
Ilungiswe ngo-June 25, 2020
Lesi sihloko sichaza okuhlanganisiwe nezimfuneko ngokukhansela okuhlobene ne-COVID-19 ngaphansi komthetho wethu wezimo ezingalindelekile ngokubhukha okwenziwe yizivakashi ezivela e-China mainland ngokuhlala kanye Nokokuzithokozisa kwe-Airbnb e-China mainland. Uma ukubhukha sekuvele kuqalile (isikhathi sokungena sesidlulile), lesi simo esingalindelekile asisebenzi. Nganoma yikuphi ukubhukha ngaphandle kokubhukha kwasekhaya e-China mainland, bheka isihloko sethu somhlaba wonke sezimo ezingalindelekile ze-COVID-19 ukuze uthole imininingwane yokuhlanganiswa. Ukuze ukhansele ngaphansi kwenqubomgomo, kuzodingeka uhlinzeke ngamadokhumenti asekelayo esimo sakho esingalindelekile
Umthetho usebenza ekubhukheni okwenziwe yizivakashi ezivela e-China mainland ngokuhlala Nokokuzithokozisa kwe-Airbnb e-China mainland. Kuvumela ukukhanselwa kokubhukha uma konke okulandelayo kuyiqiniso:
Kuphazanyiswa yizeluleko ezisemthethweni zikahulumeni zokuthatha uhambo noma ukuvinjelwa okukwenqabela uthathe uhambo endaweni osuka kuyo noma endaweni oya kuyo futhi
Kwenziwe ngosuku noma ngaphambi kosuku okwamenyezelwa ngalo izeluleko noma ukuvinjelwa futhi
Usuku lokungena aludluli ezinsukwini ezingu-30 ngaphambi kosuku lokukhansela
Umthetho awusebenzi ekubhukheni osekuvele kukhanseliwe:
Ngaphambi kosuku lezimemezelo ezisebenzayo zikahulumeni noma
Ngokususelwa esivumelwaneni sabo bobabili umbungazi nesivakashi
Thatha ngokwesibonelo ukuqubuka kwe-COVID-19 kwase-Beijing ngo-June 2020. UHulumeni Wabantu KaMasipali wase-Beijing nomnyango wokulawulwa kwezifo wamemezela ngo-June 13, 2020 ukuthi amazinga obungozi ezindawo ezithile eBeijing akhuphuke aba maphakathi noma aba phezulu. Kulesi sibonelo, umthetho awusebenzi kunoma yikuphi ukukhansela okwenziwe ngaphambi kuka-June 13, 2020, noma ekubhukheni okwenziwe ngemva kwalolo suku.
Uma ukubhukha kwakho kufaneleka, sicela usithinte phakathi nezinsuku ezingu-14 kusuka ngosuku lokukhansela. Uzocelwa ukuthi usinike amadokhumenti akhombisa isizathu sokungakwazi ukuthatha uhambo noma ukubungaza. Sizohlola amadokhumenti bese sibuyela kuwe ngempendulo. Kungabakhona ukubambezeleka ngenxa yesimo samanje se-COVID-19.
Amadokhumenti abantu abathintekile
Kokubili ezivakashi noma ababungazi bezindawo zokuhlala Nabokokuzithokozisa kwe-Airbnb:
Uma indawo ohlala kuyo iphawulwe yiziphathimandla njengendawo enobungozi obumaphakathi noma obuphezulu be-COVID-19, noma uma ikhodi yakho yemibala Yekhithi Yezempilo ikhombisa okubomvu noma okuphuzi, udinga ukunikeza nge-screenshot Sekhithi yakho Yezempilo, isimemezelo esisemthethweni sokuhlolelwa izinga lobungozi lendawo kanjalo nobufakazi bekheli ohlala kuyo, kanye/noma ubufakazi bendawo yakho efana nescreenshot se-app yebalazwe lakho
Uma kutholakale ukuthi uphethwe yi-COVID-19, usoleka ukuthi uphethwe yi-COVID-19, noma uhlukaniswe wedwa ngenxa ye-COVID-19, kufanele unikeze ngobufakazi bezokwelashwa obuhlobene noma amadokhumenti anikezwe yiziphathimandla
Amadokhumenti ezivimbelo zendawo
Uma indawo yokuhlala noma Yokokuzithokozisa kwe-Airbnb inezivimbelo zohambo ngenxa ye-COVID-19, umbungazi kufanele anikeze ngamadokhumenti alapho kukhona khona ukuhlala noma Okokuzithokozisa kwe-Airbnb. Lezi zihlanganisa:
Umyalelo weziphathimandla wokuhlukaniswa wedwa
Imikhawulo yokuhamba esemthethweni noma ezinye izimfuneko ezihlobene ne-COVID-19 zeziphathimandla zasendaweni
Isimemezelo noma isaziso somkhawulo wokungena noma wokuphuma esakhiweni noma endaweni
Amadokhumenti ezinye izimo ze-COVID-19
Ubufakazi bokuthi indiza yakho noma into yokuhamba ehamba phansi ikhanselwe ngumhlinzeki wento yokuhamba ngenxa ye-COVID-19 noma izinqubomgomo zomphakathi ezifanele
Uphawu lwakho lwesisebenzi noma amadokhumenti afanele ahlinzekwe ngumqashi wakho akhombisa imisebenzi yakho yokulawulwa kwezifo noma yezokwelapha maqondana ne-COVID-19
Uma uyisivakashi, ungahlola inqubomgomo yakho yokukhansela ukubhukha futhi uthole izindlela zokukhansela ngokukhetha uhambo lwakho ekhasini elithi Uhambo. Uma ukubhukha kwakho kungahlanganisiwe, inqubomgomo yokukhansela yombungazi izosebenza njengokujwayelekile.
Uma ungumbungazi, uzothola imininingwane kudeshibhodi yakho yokubungaza.
Sikukhuthaza ukuthi uxhumane nombungazi noma isivakashi sakho ukuthi nixoxisane ngokukhansela nokubuyiselwa kwemali.
Sikhethe izihloko ukuze kusizwe umphakathi wethu phakathi nalesi sikhathi Esikhungweni Solwazi. Ungathola imininingwane yamuva ngempendulo yethu nge-COVID-19, evela ezilungisweni zenqubomgomo eya kubabungazi nasezivakashini.
Ungafunda futhi umthetho wezimo ezingalindelekile ukuze ufunde ngendlela okuhlangatshezwana ngayo nezimo ezingahlobene ne-COVID-19.
Uma ungumbungazi, siphakamisa ukuthi ubheke izimfuneko zasendaweni eziphathelene nokuvikeleka nokulawula i-COVID-19. Kutuswa ukuthi ukhulume nesivakashi sakho kusengaphambili futhi uqinisekise izinga lobungozi bendawo esisuka kuyo nokuthi ingabe sinabo yini ubufakazi besimo sezempilo obudingeka ohlangothini lwakho.
Sicela wonke amalungu omphakathi akhumbule ukuhlonipha, ukungabandlululi, kanye nomthetho wethu wokungabandlululi lapho esebenzelana namanye amalungu omphakathi wethu.
Sizoqhubeka nokubukeza ukusetshenziswa kwale nqubomgomo. Sicela uhlale unake leli khasi ukuze uthole ezakamuva nemininingwane emisha.
Thola imininingwane ye-COVID-19 ngaphansi kwenqubomgomo yethu yezimo ezingalindelekile.